अब पहिचानवादीहरूको राष्ट्रव्यापी आन्दोलन : महताे (अन्तर्वार्ता) विगतका मधेस र थरुहट आन्दोलन निष्कर्षमा पुर्‍याउन सशक्त आन्दाेलनकाे चेतावनी
जगन्नाथ दुलाल बिहिबार, फागुन २३, २०७५, २३:२०:००
राष्ट्रिय जनता पार्टी आफ्ना सांसद रेशमलाल चौधरीलाई अदालतले जन्मकैद सुनाएपछि रुष्ट छ । सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता गरेर आन्दोलनको तयारीमा छ । राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो चाैधरीमाथि अदालतले अत्याचार गरेको भन्दै अब आफुहरु राष्ट्रिय आन्दोलनको तयारीमा रहेको बताउँछन् । पार्टी कार्यक्रमको सिलसिलामा सप्तरीको मलेठ पुगेका उनै राजेन्द्र महतोसँग आजको न्युजकर्मी जगन्नाथ दुलालले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि तपाईंहरु असन्तुष्ट हुनुहन्छ, किन ?
रेशम चौधरी आन्दोलनकारी थियो मलाई राम्रोसँग थाहा छ । थरुहट आन्दोलनको आन्दोलनकारी हो । आन्दोलनकारीलाई जन्मकैद हुने हो भने प्रचण्डलाई जन्मकैद किन भएन ? केपी ओलीलाई किन भएन ? गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जन्मकैद किन भएन ? उनीहरुलाई जन्मकैद नहुने तर एउटा थारुको छोरोलाई जन्मकैद गर्ने अदालतको फैसला अत्याचार हो । अदालतले पनि अन्याय गरेमा जनताले बोल्ने गरेको छ ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसक्नसुभएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी अब के गर्छ ?
राष्ट्रिय जनता पार्टी पहिचानको लडाइँ गर्ने पार्टी हो । हामी अब न्यायका लागि अघि बढ्छौं । अबको हाम्रो बाटो संघर्षको हो । अब राष्ट्रिय आन्दोलन हुन्छ । थारु, जनजाति मधेसी सबै मिलेर विद्रोह गर्छन् । याे सरकार असफल भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय आन्दोलन भन्नाले कस्तो खालको आन्दोलन हो ?
अब मधेसवादीहरुको मात्र छुट्टै आन्दोलन हुँदैन । थारुहरुको पनि छुट्टै आन्दोलन हुँदैन । देशभरका पहिचानवादीहरुको आन्दोलन हुन्छ । त्यो मधेसमा मात्र हुँदैन राष्ट्रिय आन्दोलन हुन्छ । विगत १०/२० वर्ष यता भएका मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनलाई अब निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ । अहिलेसम्म हाम्रा मागहरु पुरा भएका छैनन् । मधेस र थरुहटका सबै सवाललाई अब टुँगाउनुपर्छ । त्यसका लागि पहिचानवादीहरुको राष्ट्रिय आन्दोलनको तयारीमा छौं । वर्तमान संविधानप्रति अहिले पनि आदिवासी, थारू र मधेशी समुदायको असन्तुष्टि छ । अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन जारी रहन्छ ।
कहिलेबाट शुरु हुन्छ तपाईंले भन्नुभएको पहिचानवादीहरुको राष्ट्रिय आन्दोलन ?
त्यसका लागि पर्याप्त समय लाग्न सक्छ । हामी पहिचानवादी सबै सँग छलफल गर्छौ । शोषण, उत्पीडन र विभेदका विरुद्ध पहिचान,अधिकार र सम्मानका लागि संघर्षरत विचार मिल्ने अधिकारवादी एवं पहिचानवादीहरुसँग मिलेर हामी राष्ट्रिय आन्दोलन गर्छौ । यो तत्कालै नहुन पनि सक्छ । केही समय लाग्छ ।
त्यो आन्दोलनको स्वरुपचाहीँ कस्तो हुन्छ ?
हामी शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलन गर्छौ । तर, हाम्रो अबको आन्दोलन सशक्त हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फागुन २३, २०७५, २३:२०:००